Tsy Manadino Mihitsy Ny Aterineto: Araho Ny Resadresaka Eran-tany Momba Ny ‘Zo Hohadinoina’ An’ny Vondrona Eorôpeana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Aogositra 2014 19:15 GMT
Araka ilay ohabolana hoe: “tsy manadino mihitsy ny elefanta.” sary fanaingoana nataon'i W.H. Drake, avy tamin'ny “The Jungle Book”-n'i Rudyard Kipling, 1895. Efa lany andro ny Fizakàmanana, no ho izany dia natao ho ampiasain'ny daholobe ny sary.
Nandray anjara tanatin'ity lahatsoratra ity i Oiwan Lam.
Samy manana zavatra afenina daholo ny tsirairay — saingy rehefa resaka mikasika ny Aterineto izany, tokony hanan-jo hohadinoina daholo ve isika? Ny volana Mey lasa teo, nandray fanapahan-kevitra manome vahana io hevitra naroso io ny Lapam-pitsaran'ny Vondrona Eorôpena, nandidy fa afaka mangataka amin'ireo fitaovana fikarohana mba hanala ireo loharanom-baovao momba azy “efa lany andro” na “tsy mifanaraka” ao anatin'ny voka-pikarohana ireo rehetra ao anatin'ny Vondrona Eorôpeana. Nanohitra io fanapahan-kevitra io ireo orinasa tahaka ny Google, Yahoo, ary Microsoft, izay mamela azy ireo ho tompon'andraikitra amin'ny famantarana ireo loharanom-baovao mifanaraka amin'ireo fitakiana ireo.
Amin'ny lafiny ara-teknika, afaka mampihatra io “zo” io daholo ny rehetra amin'izao — tsy misy sarany na sori-dàlana manokana arahina sy natokana ho an'ny olona manana fahefana sy fifandraisana. Raha mpampiasa Aterineto ao anatin'ny Vondrona Eorôpeana ianao, tsy mila manao na inona na inona afa-tsy ny mandefa taratasy fenoina miaraka amin'ny anaranao sy ny mikasika mazava tsara ilay zavatra tianao hotsoahina ao amin'ny voka-pikarohana. Hatramin'ny nihazonan'ny Lapam-pitsaràn'ny Vondrona Eorôpeana sy namoronany ny fehezan-dalàna mikasika ny Zo Mba Hohadinoina, ny volana Mey lasa teo, dia naharay fangatahana fanafoanana maherin'ny 91.0000 isa ny Google, ary ny antsasany tamin'izay no vao nekena.
Manahy ireo mafana fo ho an'ny fanehoan-kevitra malalaka fa hanokatra varavarana ho an'ireo mahery anaty fikambanana sy ao amin'ny governemanta io fanapahan-kevitra io, ka hahafahany mamono ireo mombamomba azy tsy dia mendrika loatra ao anatin'ny voka-pikarohana. Ary tsy ho moramora ny fametrahana ny fanapahan-kevitra amin'ireo orinasa teknolijika tahaka ny Google sy Yahoo — fahadisoana lehibe eo amin'ny sehatry ny zo anaty aterineto ny fanaisorana io fanapahan-kevitra io eo am-pelatànan'ny fitsaràna.
Eo anivon'ireo fanamby maro hiadianay isanandro amin'ny maha-vondrom-piarahamonina anay io olana io. Manaiky izahay fa misy ireo karazanà loharanom-baovao sasany mendrika fiarovana. Ohatra tsotra izao ny mombamomba ara-bola sy ny ara-pahasalaman'ny olona iray na ny resaka ara-nofony — mieritreritra isika fa manana zo hitàna ireo resaka ireo ho azy samirery ny olona. Saingy sarotra ihany ny mitsara ny loharanom-baovao momba ny hetsika ara-politikan'ny olona iray. Betsaka loatra ny zavatra maizimaizana ao.
Volana vitsy taorian'ny namoahana io didy io, nampiseho fanahiana momba ny politika ao anatin'ny lisitry ny vondrom-piarahamoninay i Oiwan Lam, tonian-dahatsoratry ny Advox China. Nanontany izy hoe: “Ahoana no hahafahantsika misoroka ny rahona mety hitranga eo amin'ny tontolon'ny vahoaka anaty aterineto raha ampiharina io zo io?”
Nampiseho ny resadresaka tohin'izay fa maro amin'ireo mpikambana ao anatin'ny vondrom-piarahamoninay no manahy ny mety hanenan'io lalàna io ny fahafahan'ireo mpanao gazety, ireo mafana fo, ireo mpampiasa aterineto, ary ireo mpisolovava mpiaro ny zon'olombelona hanangona sy hitahiry ireo porofo amin'ny fandikan-dalàna, ny kolikoly, ary ireo zavatra ratsy hafa tian'izy ireo aseho masoandro.
Nametraka izao fanontaniana izao i Rasha Abdulla, Ejiptiana mpanoratra ary mpampianatra mpikaroka ny lafiny serasera ao amin'ny Anjerimanontolo Amerikana ao Caire: Inona no mitranga rehefa manjavona tampoka ao amin'ny voka-pikarohana ny loharanom-baovao manan-danja lehibe ho an'ny tombotsoam-bahoaka? Nanoratra izy:
Toa azoko an-tsaina amin'izao fotoana izao any Ejipta fa MANIRY MAFY ny hohadinoina ireo mpitandro filaminana tsirairay manana lahatsary ao amin'ny YouTube sy ireo mpiasam-panjakana mpanao kolikoly izay efa niteny zavatra tanatinà lahatsary na tanatinà lahatsoratra an-gazety. Ireo rakitra nomerika no hany ananantsika mba hanadihadiana ireo zava-doza ratsy sasany nitranga.
Nanontany i Leila Nachawati, Espaniôla-Syriana mpanoratra sady mpikaroka momba ny serasera ao amin'ny Anjerimanontolo Carlos Tercero ao Madrid, hoe: “Ahoana no hanomezana antoka ho antsika fa tsy hanjavona tsotra izao fotsiny ireo loharanom-baovao manorisory (saingy mitombina) ireo?”. Notohizany hoe:
Tsy maintsy miankina amin'ireo orinasa [isika] amin'ny fanapahana raha mikasika ny “tombotsoam-bahoaka” ilay loharanom-baovao, izay fantatsika ihany fa tena resaka mampisolifatra tokoa…Niresaka ny “filàna marimaritra iraisana eo amin'ny fiainana manokana sy ny fahalalahana miteny” ny Vondrona Eorôpeana, anefa kosa, raha tsy misy lisitry ny singa manokana iharany dia tsy mahalaza na inona na inona akory io.
Nampisy aingam-panahy ny vondrom-piarahamoninay hanontany ireo mpiara-miasa aminay — ireo manam-pahaizana eran-tany momba ny lalànan'ny Aterineto — ity resadresaka ity, mba hanao tsikera mikasika ilay lalàna navoaka sy hanome ny antsipirian'ny vokatr'izany teo amin'ny lafiny politika sy ny adihevitra politika tany amin'ny firenen'izy ireo hatramin'ny namoahana azy. Nandefa ireto fanontaniana manaraka ireto izaho sy i Oiwan Lam, tany amin'ireo lisitry ny vondrom-piarahamoninay sy ireo manam-pahaizana maro fantatray sy atokisanay:
Nisy resadresaka sy adihevitra momba ny fampiharana io “zo” io ve tany amin'ny firenena misy anao? Nanisy resaka momba io olana io ve ireo lapam-pitsaràna any an-toerana?
Ahoana no eritreretinao ho mety fiantraikan'ny fanapahan-kevitry ny Vondrona Eorôpeana eo amin'ny fizotran'ny politikan'ny Aterineto any amin'ny firenenao na ny faritrao?
Raha nampiharina tao amin'ny firenenao io politika io, mieritreritra ve ianao fa mety handrahona ny tontolon'ny vahoaka ao anaty aterineto na ny tombotsoan'ny daholobe izany? Olana manokana toy inona no mety “ho foana” ao amin'ny voka-pikarohana raha nampiharina tao amin'ny firenenao io?
Mieritreritra ve ianao fa mety hisy marimaritra iraisana eo amin'ny zon'ny tsirairay hohadinoina sy ny fahalalahan'ny fivohizana loharanom-baovao?
Manasa ireo manam-pahaizana sy ireo olon-tsotra izahay mba hamaly ireo fanontaniana ireo ho anay — miangavy anao haharisika hamaly ity lahatsoratra ity ao amin'ny sehatra fametrahana ny fanehoan-kevitra, na handefa ny eritreritrareo aty aminay ao amin'ny advocacy [at] globalvoicesonline [dot] org. Tsy andrinay ny hamoahana azy ireo sy hanohizana ny tafatafa.